'' သင်ကငါ့ကိုထိတဲ့အခါမှာ '' များအတွက်စာအုပ်ကလပ်ဆွေးနွေးချက်မေးခွန်းများ
စာပေ စာအုပ်ဒုတ် & Classes ရဲ့
'' သင်ကငါ့ကိုထိတဲ့အခါမှာ '' ရေဗက္ကာသည်ခမည်းတော်အရာ၌စာအုပ်ကလပ်ဆွေးနွေးချက်မေးခွန်းများအားဖြင့်
by Erin Collazo Miller က
သင်ဟာရေဗက္ကာသည်ခမည်းတော်အရာ၌အားဖြင့်ငါ့ကိုထိတဲ့အခါမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဝတ္ထု ရောနှောလူကြီးများနှင့်လူငယ်များမွေ့လျော်လိမ့်မည်။ ထိုအသုံးပါ စာအုပ်မှာကလပ် ကိုသင်သည်ခမည်းတော်အရာ၌ရဲ့စာအုပ်ထဲသို့သင့်ရဲ့စာအုပ်ကလပ်သို့မဟုတ်စာဖတ်ခြင်းအုပ်စုကိုဦးဆောင်လမ်းပြရန်ရေဗက္ကာသည်ခမည်းတော်အရာ၌အားဖြင့်ငါ့ကိုထိတဲ့အခါမှာအပေါ်ဆွေးနွေးမှုမေးခွန်းများကို။
ဘယ်လို 20,000 ပိရမစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်တစ်ဦးအခန်းကဏ္ဍခဲ့တာလဲ ဘယ်လိုသူမ၏မိခင်ရဲ့ရှာပုံတော်သူမ၏အသက်တာ၏အဓိပ္ပာယ်စေရန်ဂိမ်းပြပွဲမှန် Miranda ရဲ့ရှာပုံတော်နှင့်အတူခဲ့သလဲ
သင်သည်အမှုရောက်သောပုဂ္ဂိုလ်အမှန်တကယ်အချိန်ပြန်ခရီးထွက်မတိုင်မီတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်ဖို့ခွင့်ပြုအချိန်ခရီးသွားများ၏ concept ကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြသလား? သို့မဟုတ် Malcolm နှင့်ဂျူလီယာရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုသင်သဘောမျိုးလုပ်ခဲ့တာလဲ
Malcolm Miranda ပြောထားသည်, (51) "အိုင်းစတိုင်းဒါဟာကျနော်တို့အမှုအရာတွေအကြောင်းစဉ်းစားရန်အသုံးပြုနေဘယ်လိုပါပဲ။ ဘုံသဘောမျိုးအတွေး့အလေ့အထဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်အချိန်အများကြီးကပဲစစ်မှန်တဲ့ဘာ၏လမ်းရရှိသွားတဲ့" ။ သင်သည်ထိုစကားမှန်ရဲ့ထင်ပါသလား? သငျသညျအစဉျအမွဲအမှန်တရားတွေ့မြင်နိုင်ရန်အတွက်ယူဆချက်၏သွားကြကုန်အံ့ခဲ့ဖူးပါသလော သငျသညျအစဉျအမွဲအလွန်စမတ်သူမည်သူမဆိုသိပေမယ့်မဆိုဘုံသဘောမျိုးရှိသည်ဖို့မထင်ခဲ့တာလဲ သငျသညျမဟုတ်ဘဲဘုံသဘောမျိုးသို့မဟုတ်အခြားလူများလက်လွတ်ကြောင့်အနည်းငယ်လေးနက်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်မလား?
ဘယျအခြိနျမှာသင်ရယ်မောသောသူသည် Malcolm ဖြစ်ခဲ့သည်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့တာလဲ
Madeline သည် L'Engle အားဖြင့်အချိန်တစ်အရေးအကြောင်းတွေ Miranda အပေါ်, ဒါပေမယ့်လည်းရေဗက္ကာသည်ခမည်းတော်အရာ၌နှင့်ဤစာအုပ်များအတွက်စိတ်ကူးအပေါ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ သင်သည်နောက်တဖန်အချိန်အတွက်တစ်ဦးကအရေးအကြောင်းတွေဖတ်ချင်အောင်ငါ့ကိုထိတဲ့အခါမှာဖတ်နေသလား?
သငျသညျ၏လမ်းကိုင်ကြောင်းမဆိုစာအုပ်ရှိပါသလား အချိန်အတွက်တစ်ဦးကအရေးအကြောင်းတွေ Miranda ၏ကိုင် - သင်တစ်ခုခုကိုကလေးတစ်ဦးသို့မဟုတ်တစ်ဦးအရွယ်ရောက်ပြီးသူအဖြစ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ပြန်ဖတ်သလော
ဘယ်လို Miranda ဤစာအုပ်ကိုပြောင်းလဲသလဲ, ဘယ်လိုနည်းခုနှစ်တွင်သူမ၏သူမ၏မိခင်နှင့်အတူဆက်ဆံရေးနှင့်မိတ်ဆွေများရင့်ကျက်သလဲ?
သငျသညျ 1 မှ5၏စကေးအပေါ်ငါ့ကိုထိလိုက်တဲ့အခါ rate ။
ဆူးရဟန်းတော် Kidd တို့က '' Wings ၏အဆိုပါတီထှငျခဲ့ '- ဆွေးနွေးချက်မေးခွန်းများ
Lian ပစ္စည်းတပ်ဆင်မှုနဲ့အားဖြင့် '' Big Little ကမုသာ '' အဘို့အဆွေးနွေးချက်မေးခွန်းများ
Christina Baker Kline အားဖြင့် '' အဆိုပါကျောင်းဆောင်ရထား '- ဆွေးနွေးချက်မေးခွန်းများ
စာအုပ်ကလပ်ဆွေးနွေးချက်မေးခွန်းလွှာ - Graeme Simsion အားဖြင့် '' အဆိုပါ rosy စီမံကိန်း ''
စာအုပ်ကလပ်မေးခွန်းလွှာ - Khaled Hosseini အားဖြင့် 'အစွန် Runner' '
Liz Murray အားဖြင့် '' Breaking ည ''
စာအုပ်ကလပ်ဆွေးနွေးချက်မေးခွန်း - Erin Morgenstern အားဖြင့် 'အညဆပ်ကပ်' '
Livia Drusilla - ရောမမြို့ဂျူလီယာသြဂတ်၏ Empress ခေါ် Livia
Tantra တစ် Tantric မာစတာရဲ့ကြည့်ရန်
MBA ဘွဲ့ရကျောင်းသားများအဘို့အအသုံးဝင်သောမိုဘိုင်း Apps ကပ
9 မှော်အင်းဆက်ပိုးများနှင့်သူတို့၏ Folklore
6 Burps နှင့်လေချဉ်တက်ခြင်းစေသတင်းများဒါက
မေရီလန်း GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
Bernie Sanders ဇီဝ
နားထောင်ခြင်းအဓိပ္ပာယ်နှင့် Grammar အတွက်ဥပမာများ
Scuba ယပ်ရွေးချယ်ခြင်း: Styles နှင့်အင်္ဂါရပ်များ
အမေရိကန်ပွင့်လင်းဆုဖလား: ဒါဟာအဟောငျးဒါဟာ Is ကိုဘယ်လိုအဘယ်ခေါ်မယ့်, Champ ဒါဟာ Keep ပါသလား?
လုကိ Junius Brutus
လက်တင်မြို့ပြတေးဂီတ - Reggaeton ရဲ့ Evolution
2008 Harley-Davidson lineup ပြခန်းနှင့်ဝယ်သူလမ်းညွှန်
အဘယ်သူသည် "မိုင်းဒီ Little ကအလင်း" ရေးသားခဲ့သူ?
ဟောငျးဂုဏ်တော်တက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ